Fampiasana GIS hifehy sy hisorohana ny Dengue
Ao amin'ny tontolontsika Mesoamerikana sy ny tropika manerantany amin'ny ankapobeny, ny Dengue dia aretina mahazatra mandritra ny volana amin'ny vanim-potoanan'ny orana. Ny fahafantarana ny toerana isan'ny tranga isan'ny tampona indrindra dia fampiharana iray izay ahafahan'ny fampiharana GIS manome valiny sarobidy. Tadidiko fony aho mbola kely, ny dengue dia tsy ...
jeospatial - GIS, SuperGIS
Vaovao 3 avy amin'ny Supergeo
Avy amin'ny mpamorona ny maodely SuperGIS dia mahazo vaovao vitsivitsy izay mendrika ny hamonjy isika. Sampan-draharaha misahana ny asa vaventy sy ny fambolena i Fijairah Manatsara ny fitohizan'ny fotodrafitrasa miaraka amin'i SuperGISFujairah dia iray amin'ireo Emirà Arabo Mitambatra, Afovoany Atsinanana. Nanapa-kevitra izy ireo fa hampihatra ny teknolojia SuperGIS amin'ny fitantanana ny fihodinan'ny fotodrafitrasa, ...